ယူရို သန်း 740 အထိ အသုံးစာရိတ် တိုးလာဖို့ ရှာဖွေ ကြံဆနေတဲ့ ဘာစီလိုနာ - SPORTS MYANMAR
အင်္ဂါနေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေး အပြီးမှာ ဘာစီလိုနာ ဟာ လက်ရှိ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်းတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အနေနဲ့ အသင်းပိုင် ရှယ်ယာ တစ်ချို့ ရောင်းချမယ့် အစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇွန်လ 16 ရက်နေ့မှာ အထွေထွေ ညီလာခံ ခေါ်ယူကာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချဖို့ အတည်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ညီလာခံ ကို လျှို့ဝှက် မဲပေးတဲ့ စနစ် နဲ့ ကျင့်သုံးမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ ပရိသတ်ထောက်ခံမှု များခဲ့ရင် လက်ရှိ အကျပ်အတည်းကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ အသုံးစာရိတ် ယူရို 740 သန်း အထိ ထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ကာ ၊ အပြောင်းအရွှေ့မှာလဲ ကစားသမားသစ်တွေ ခေါ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသင်းရဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ကလပ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဖွဲ့ဝင် Members တွေကို မေးခွန်း2ခု မေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
1. ဘာစီလိုနာ Licensing & Merchandising ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု 49.9% ကို ရောင်းမလား
2. La Liga ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခ မူပိုင်ခွင့် 25% ကို ရောင်းမလား
ဘာစီလိုနာ ဟာ သူတို့ရဲ့ Licensing & Merchandising ရှယ်ယာတွေကို ရောင်းချဖို့ လုပ်ဆောင်နေခဲ့တာ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိတောင် ရောက်နေပါပြီ။ အဲဒီ ကနေ ဝင်ငွေ ယူရို သန်း 200 ရမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ သို့သော်လဲ အဲဒီ လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ ဇွန်လ 30 ရက်နေ့ အမှီ ပြီးစီးဖို့ မလွယ်တာကြောင့် ၊ ကလပ် အနေနဲ့ လက်ရှိ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွင်း အရှုံးမပေါ်အောင် ရှင်းတမ်းပြနိုင်ဖို့ နောက်ထပ် ဝင်ငွေ လမ်းကြောင်း တစ်ခု ဖန်တီးဖို့ လိုအပ်နေပြန်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ ယိုဟန် လာပေါ်တာ ဦးဆောင်တဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ လာလီဂါ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခ မူပိုင်ခွင့်ထဲက ရှယ်ယာတစ်ချို့ကို ရောင်းထုတ်ကြမလား ဆိုပြီး စကားလမ်းကြောင်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့လဲ ကနဦး လုပ်ငန်းစဉ် တော်တော်များများကို ကြိုတင် ပြီးစီးအောင် လုပ်ဆောင်ထားပြီးပါပြီ။ ဘာစီလိုနာ ဟာ လာလီဂါ နဲ့ CVC တို့ အကြား ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်မှာ ပူးပေါင်းတော့မှာပါ။
ရုပ်သံ ထုတ်လွှင့်ခထဲ က 8.2% အတွက် CVC ကို နှစ် 40 အကြာ ပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ အပြန်အလှန် အနေနဲ့ ချေးငွေ ယူရို 270 သန်း ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာ က အဲဒီ ပမာဏ ကို “အကြွေး” စာရင်းမှာ ထည့်တွက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ချိန်တည်းမှာ ဘာစီလိုနာ တာဝန်ရှိသူတွေဟာ CVC နဲ့ Goldman Sachs တို့ကို တွေ့ဆုံနေပြီး နောက်ထပ် ယူရို သန်း 270 ထပ်မံ ရရှိဖို့ ကြိုးစားနေပြန်ပါတယ်။
Barca Studios ရဲ့ 49% ကို ရောင်းချဖို့ ကလပ် အဖွဲ့ဝင်တွေကလဲ သဘောတူပြီးပြီ ဖြစ်လို့ ၊ အဲဒီ ကနေ ရရှိလာမယ့် ဝင်ငွေတွေကို ဘဏ္ဍာရေး အသုံးစာရိတ်ထဲကို ထည့်သွင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာစီလိုနာ ဟာ လာမယ့် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့မှာ ကစားသမားသစ်တွေ ထပ်မံ အားဖြည့်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ဘိုင်ယန် မြူးနစ် အသင်းက တိုက်စစ်မှုး လီဝန်ဒေါ့စကီး ကို ခေါ်ယူဖို့ အတွက် ထိပ်ဆုံးကနေ ရေပန်းစားနေပြီး ၊ ပိုင်လ် တိုက်စစ်မှုးကလဲ ဘိုင်ယန် နဲ့ လမ်းခွဲတော့မယ့် အကြောင်း မကြာခင်ကမှ အတည်ပြု ထုတ်ဖော် ပြောဆိုထားခဲ့ ပါတယ်။